Xogtii Ugu Dambeysay Qarax Baabuur oo ka dhacay Muqdisho & Mas’uulka lala eegtay… – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAXogtii Ugu Dambeysay Qarax Baabuur oo ka dhacay Muqdisho & Mas’uulka lala eegtay…
Xogtii Ugu Dambeysay Qarax Baabuur oo ka dhacay Muqdisho & Mas’uulka lala eegtay…
mid kamida is goosyada muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax Gaari oo ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Qaraxa ayaa ka dhacay nawaaxiga Maqaayadda The Village ee degmadaasi Hodan, waxaana uu ka dhashay Gaari nuuca raaxada ah.
Ilo deegaanka ayaa sheegay in qaraxa Gaarigiisa loogu xiray shaqsi u shaqeynayay maamulka gobolka Banaadir.
Waxaana la sheegay in wax khasaaro uusan geysan qaraxaasi, basle burbur xoogan uu soo gaaray Gaarigii shaqsigaasi.
Ciidamo ka tirsan kuwa DFS ayaa goobta gaaray kuwaas oo baaritaano ka sameeyay xaafado ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmadaasi oo ku aadan qaraxaasi.
Muddooyinkii dambe ayaa waxaa M/ Muqdisho ka dhacayay falal liddi ku ah ammaanka maana muuqato qorshe ay wax uga qabanayaan laamaha ammaana ee dowladda Soomaaliya.
43,655 total views, 605 views today
43,655 total views, 605 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
43,727 total views, 605 views today
43,727 total views, 605 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
43,741 total views, 605 views today
43,741 total views, 605 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
43,763 total views, 605 views today
43,763 total views, 605 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
43,798 total views, 607 views today
43,798 total views, 607 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]